Ilbaxnimooy Maxaad Tahay? Maxaase ka dhexeeya Ilbaxnimada iyo Nabadda?
Tuesday, 25 April 2017 00:21
Afka/lugad bulsho meel daganayd ay leeday laga bilaabo eraygii u horeeyay iyo ka maanta u dambeeyay hodanimada af-kaas waxay ay ku soo xidhnayd sida jiilba jiil ugu sii gudbinayay jiil, taas oo jiilwalba erayo ku sii darayay. Abuuridda erayada cusub ee af-ka ayaa waxa ay kolba ku xidhnayd marxaladahii jiray , duruufihii adkaa iyo badhaadhihii jirayba.
Af- Somaliga ugu hodansan waxa lagaga hadlaa Somaliland, af-somaliga ay ku hadlaan Somalida Somaliland ayaa ah af qoto dheer, oo mug iyo baaxd leh , taas oo caddaynaysa in ay Somaliland ahayd meeshii uu ka bilaabmay af-somaligu kadibna ku fiday degaanada Somalida oo dhan. Curiyeyaashii, hesaagii, gabyeyashii iyo dhamaan suugaaniyahankii ugu tunka waynaa waxa ay dhamaantood ka soo jeedeen Somaliland.
AHUN hadaan egno af Somaliga ama majaajilada uu samayn jiray Meecaad Miigane, San-gub, Yam yam, iyo gabayadii Gaariye, Had-raawi, Cabdi-qays iyo hal-abuuro aan la soo koobi karayn oo uu ka mid yahay ab-waan dheeg oo u soo joogay is afgaran waagii Somaliland iyo Somalia ee 60-yadii, markii ay laba dal isku biireen. Inkasta oo af-Somaligii degaanada kale ee Somalidu horumar sameeyay tan iyo markii la qoray af-Somaliga, hadana waqti dheer ayay qaadanaysaa in af-Somaliga Somaliland wada gaadho deeganada Somalida, haddii aanu af-somaligu sii wiiqanba.
Dhinca kale Hadaan eegno reer Jabuuti dagaalka gacan ka hadlku aad ayuu ugu badan yahay, oo af-kii gacan baa ka soo horayasa, maxaa yeelay af-Somaligooda ayaa liita, maxaa yeelay af-fransiiskii ayaa ku milmay ama wiiqay af-somaligoodii. Hadaan eegno bari dhawayd waxa ka dhacay wadanka Belgim in dhalinyaro reer Jabuuti ihi ay nin dhalin yaro ah oo reer Jabuutiya ay indhaha ka tuuraan, taas oo ay ugu wacan tahay ka arad-naanta afka-Somaliga, iyo isqancin la'aanta ku salaysan Af-Somaliga Inkasta oo ay dhici layhayd in ay isku qanciyaan Af-fransiis oo ay kaga fiicnayeen af-somaliga, hadana waxa ka awood roonaaday af-somaligii iyo dhaqankii ay haysteen.
Somliya xageeda waxa ay dagaaladu ka socdeen 27-sanadood, taas oo ay ugu wacan tahay, Somaliya ma laha dhaqan sal adag oo ku lamaan af-Somali hodan ah ama af kaleba, af-somaliga reer Somalia aad ayuu litaa, suugaan iyo dhaqan soo jireenana ma la ha, taas keentay in uu dagaal ka soco mudo ku dhaw 27-sanadood.
La'aanta dhaqan iyo Af-hodan ah oon ku lamaanayn ayaa waxa ay keentaa, been, tuugo iyo dhac ku bata bulshadaas, taas oo Somalia ka soo socotay 27-sanadood ee aan ku jirno.Taas oo adkaynaysa wada noolaanshaha iyo wada jirka Somaliland iyo Somalia.
Aduunka wadanba wadanka uu ka af-hodansanyahay ayay ummadiisu ka ilbaxsan tahay, ,ka nabad jeceshay kana naxariis Aadanimo badan tahay. Hadaad eegto wadama horumaray gaar ahaan reer Galbeed-ka, aadamahii dhaaf oo bisadahii iyo aydii ayaa dhakaatiir u gara, cuntooyin u gaara iyo hay'addo ka shaqayeeya nadaafadooda oo tima iyo cidiyaha ka gaabiya ayaa loo sameeyay.
Aduunka wadamadii uu dhaqankoodu ama af-koodu liitay ha ahaato Afrika, Carab iyo meelo ka tirsan Asia ayaa waxa ka dilaacday dad-qalato keentay in dadkii ka yaacaan kuna dhintaan badaha loo maro Yurub.
More in this category: « Cida dhabta ah ee saylac qaska ka wada + hal seegtay mayor iidle iyo ku xigeenkiisa + hal maangal ah iyo mid kale aan maagal aheyn. Dr.khadar-Libaaxley. 2017 London Conference on Somalia: Context and Scope »